IPOA oo baareysa dil ay booliska u geysteen haweeney | Star FM
Home Wararka Kenya IPOA oo baareysa dil ay booliska u geysteen haweeney
IPOA oo baareysa dil ay booliska u geysteen haweeney
Maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska ee IPOA ayaa baaraya geerida haweeney 30 jir ahayd oo ku dhimatay toddobaadki hore bartamaha magaaladatan Nairobi.
Jackline Mugure Maina ayay si aan ula kac ahayn ugu dhacday xabad loo waday nin burcad ah islamarkaana ay u geeriyootay.
Sarkaalka dilka geystay oo ka howlgala saldhigga booliska ee deegaanka Kamukunji ayaa doonayay inuu toogta nin tuug ah oo wax soo dhacay balse xabaddi u tuuray ay ku haleeshay haweeney wadada mareysay oo saarneyd mootada nooca loo yaqaana bajaaj waxayna ku dhimatay isla goobta.
Haweeney saxiib la ah gabadha geeriyootay ayaa sheegtay in ay dalbanayaan cadaalad islamarkaana ay khalad ahayd in xabad laga rido meel dad badan ku sugan yihiin.
Dhacdadan ayaa mar kale su’aalo ka dhalisay tababbarka ciidamada amniga ee ku saabsan maaraynta hubka ee meelaha ay dadku ku badan yihiin.
Bishii saddexaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii saraakiisha booliska ee dhaqangelinayay bandowga habeenkii ay toogteen wiil 13 sano jir ahaa xilli uu ku suugna xaafadda Kiamaiko ee deegaanka Huruma ee magaladatani Nairobi isaga oo taagan balakoonka gurigooda.
Previous articleHaweeney u dhalatay Sacuudiga oo dil lagu xukumay